ကြောက်စရာအသွင်အပြင်ရှိပေမယ့် လူသားတို့ကို အန္တရာယ်မပေးသော တိရိစ္ဆာန် (၁၄) မျိုး – One Daily Media
တိရစ္ဆာန်များဟာ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည့်မျိုးစိတ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်တော့အန္တရာယ်မကြီးလှပါဘူး။ အချို့ကသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းပြီး အချို့ကသူတို့ရဲ့အံသွား (သို့) အစွယ်တွေကြောင့် ကြောက်စရာကောင်းနေကြတာပါ။
ဒါပေမယ့်အမှန်တရားက ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေကိုလူသားတွေကကြောက်ရွံ့တာထက် လူသားတွေကိုသူတို့ကပိုကြောက်ကြပါတယ်။
အသွင်အပြင်တွေကြောင့် မကြောက်ပါနဲ့ ။ကြောက်စရာသွင်ပြင်ရှိနေပေမယ့် အန္တရာယ်မရှိသော အကောင် ၁၄ မျိုးကိုပြသပေးလိုပါတယ်။
(၁) Basking Shark
ဒီငါးမန်းရဲ့ပါးစပ်ဖွင့်ဟပုံများက အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုသဖွယ် ကြောက်စရာကောင်းပေမယ့်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။ အခြားအသားစားငါးမန်းမျိုးစိတ်များနှင့်မတူဘဲ basking ငါးမန်းများက plankton၊ ငါးငယ်များနှင့်ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများကိုသာ စားကြပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအကြီးဆုံးငါးဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ ၁၂ မီတာကျော်ရှည်ပြီး ၅ တန်ကျော်အလေးချိန်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဧရာမအာဖရိကပိုးနားသန်များဟာ ၃၀ စင်တီမီတာအထိရှည်လျားကာ ၅ နှစ်မှ ၇ နှစ်အထိအသက်ရှင်နိုင်ပြီး ခြေထောက် ၃၀၀ မှ ၄၀၀ အထိရှိပါတယ်။ ဤထူးဆန်းသောသတ္တဝါသည်သစ်တောများတွင်နေထိုင်ပြီးသစ်ပင်များ၊ သစ်တုံးများ (သို့) အပင်များပျက်စီးခြင်းမှအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကိုစားသုံးပါတယ်။ ကင်းခြေများ များနှင့်မတူဘဲ ထိုအကောင်များက မကိုက်ပါဘူး။ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန် ထုတ်လွှတ်သော အရည်များဟာ အများအားဖြင့်လူကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေပါဘူး။
Milksnake ဟာ သဘာဝအဆိပ်အပြင်းဆုံးမြွေများဖြစ်သော Coral မြွေနှင့်ဆင်တူပါတယ် ။နှစ်မျိုးစလုံးတွင်အနီရောင်၊ အဝါရောင်နှင့်အနက်ရောင်အစင်းကြောင်းများရှိသော်လည်းတစ်မျိုးက လူသားများအား လုံး၀အန္တရာယ်မရှိစေဘဲ ၊ အခြားတစ်မျိုးက‌ တော့ အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
(၄) ပင်လယ်ဝက် (Scotoplanes)
ပင်လယ်ဝက် (Scotoplanes)ဟာ အလွန်ထူးဆန်းသောရေအောက်သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။သေးငယ်သောအကောင်များဟာ ပြွန်နှင့်တူသောခြေထောက်များဖြင့်လှည့်ပတ်ရွေ့လျားပါတယ်။ လူများစွာက တော့ သဘာဝမဟုတ်သောအသွင်အပြင်ကြောင့် ပင်လယ်ဝက်များကိုကြောက်စရာကောင်းသည်ဟုထင်ကြသော်လည်းဤသတ္တဝါများသည်အော်ဂဲနစ်အမှုန်များကိုသာ စားသုံးပါတယ်။
(၅) Manta ray
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးငါးကောင် (Mobula birostris) ဖြစ်ပြီးအချင်း ၇ မီတာအထိရှည်လျားပါတယ်။ သူတို့၏အရွယ်အစားကြီးမားပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းအသွင်အပြင်ရှိနေသော်လည်းရေငုပ်သမားများ အနေဖြင့် ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။။ ဤတိရစ္ဆာန်များဟာ plankton ကဲ့သို့သားကောင်ငယ်များကိုစားပါတယ်။
လင်းတများသည်သူတို့၏အမွေးမရှိသောခေါင်းများ၊ အတောင်ပံကြီးများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၌အသေကောင်ရှိမှသာပေါ်ထွက်လာသောအလေ့အထ ကြောက်စရာကောင်းပုံရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်ဒီသားကောင်တွေကလူသားတွေအတွက် အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။သူတို့၏လက်သည်းများသည်တိုတောင်းပြီး အန္တရာယ်ပေးရန်ထက် လမ်းလျှောက်ရန်ပိုမိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပါတယ်။
သူတို့ဟာ သေပြီးသား သားကောင်များကိုသာ စားသောက်ပြီး ဒါပေမယ့်အစာရှားပါးတဲ့အခါသူတို့ကသားကောင် ငယ် လေးတွေကိုလိုက်ရှာစားသောက်ပါတယ်။
ဝေလငါးမန်းများဟာ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးငါးဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားမှာကျား၊ မကွဲပြားပါတယ်။ အမများက မီတာ ၂၀ ခန့်အထိကြီးထွားနိုင်ပြီး အထီးများ ကတော့ ပိုသေးငယ်ပါတယ် ။ ဒီအဏ္ဏဝါဧရာမ ငါးများက ကလူသားတွေကိုမတိုက်ခိုက်ပါဘူး။
(၈) Whip Scorpion
ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဟာ ပင့်ကူနဲ့ကင်းမြီးကောက်အရောနဲ့တူပါတယ်။ များစွာသောလူတို့က ကြောက်ရွံ့ ကြသော်လည်း ရှက်တတ်ပြီး သိပ်ရန်လိုခြင်းမရှိ သောအကောင်များဖြစ်ကြပါတယ် ။သူတို့မှာအဆိပ်မရှိတာကြောင့် လူသားတွေအတွက်လည်း အန္တရာယ်မရှိစေပါဘူး။ သူတို့က ပိုးဟပ်ကဲ့သို့ သော ပိုးမွှားများကိုထိန်းချုပ်သောကြောင့် သူတို့ကိုမသတ်ရန်အကြံပြုလိုပါတယ်။
(၉) Hercules beetle
ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအင်းဆက်များဟာ ၁၇ စင်တီမီတာထက်ပိုရှည်နိုင် ပြီး၎င်းတို့သည်အကြီးဆုံးပိုးကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့၏ ဦး ချိုများသည်ကြောက်စရာကောင်းသော်လည်း၎င်းတို့သည်သစ်သီးများကိုအဓိကစားသောအပင်စား ပိုးကောင်များဖြစ်သောကြောင့်အန္တရာယ်မရှိချေ။
(၁၀) European yellow-tailed scorpion
အဝါရောင် အမြီးရှ်ိသော ကင်းမြီးကောက်များဟာ ပျမ်းမျှ ၄ စင်တီမီတာသာ ရှိသော်လည်းကြောက်မက်ဖွယ်သွင်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၁) Chinese giant salamander
တရုတ်ဧရာမဆာလာမင်ဒါဟာ အရှည် ၁.၈ မီတာအထိကြီးထွားနိုင်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးကုန်းနေသတ္တဝါဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီဧရာမတိရိစ္ဆာန်က အင်းဆက်တွေ၊ ငါးသေးသေးလေးတွေနဲ့အခြားကုန်းနေသတ္တဝါတွေ ကိုပဲစားပါတယ်။ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများ (ပင့်ကူများ၊ ပိုးတုံးမများ၊ အင်းဆက်များနှင့် crustaceans) နှင့်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများ (အချို့နို့တိုက်သတ္တဝါများ၊ တွားသွားသတ္တဝါများ၊ amphibians များနှင့်ငါးများ) ကိုစားပါတယ်။
Possum များသည်မြို့ပြသတ္တဝါအားလုံးတို့တွင်အန္တရာယ်မပေးနိုင်ဆုံးနှင့်အသုံးဝင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။ ၎င်းတို့ဟာ ပိုးမွှားများဟု အခေါ်ခံရလေ့ရှိပြီး အမှိုက်ဗူးများအား ဖွလေ့ရှိသည်ဟုမကြာခဏစွပ်စွဲလေ့ရှိသော်လည်း လူတွေအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုမရှိပါဘူး။
သူတို့က အသေကောင်၏အရိုးများအပါအ၀င်အရာအားလုံးကိုချေဖျက်နိုင်ကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အသေကောင်များနှင့် အခြားအညစ်အကြေးများမှရောဂါများကိုရှင်းလင်းရာတွင် အသုံးဝင်ပါတယ်။
(၁၃) Tarantula (အမွှေးထူပင့်ကူ)
Tarantula သည်သူတို့၏အမွေးအမှင်များနှင့်ကြီးမားသောခြေထောက်များကြောင့်လူအချို့ကိုထိတ်လန့်‌စေပါတယ်။ သို့သော်ဤပင့်ကူများသည်လူသားများအားအန္တရာယ်မပေးချေ။
သူတို့သည်ကိုက်နိုင်သော်လည်းသူတို့၏အဆိပ်သည်ပျားထက် ပို၍ အားနည်း သောကြောင့် arachnid ချစ်သူများအကြားဤပင့်ကူများဟာ လူကြိုက်များသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်လာပါတယ်။
Gharial သည်ရှည်လျားကျဉ်းမြောင်းသောနှာခေါင်းမှ လွဲ၍ မိကျောင်းနှင့်တူပါတယ် ။ ဒီသားရဲတွေဟာ လူသားတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ မကြာခဏထင်ခဲ့ကြပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ သူတို့ရဲ့မေးရိုးတွေဟယ ကျိုးပဲ့လွယ်ပါတယ်။
ဒီသတ္တဝါတွေထဲကတစ်ကောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မိရင် သင်ဘာလုပ်မလဲ ?? သင်သိထားတဲ့ အသွင်အပြင်ကကြောက်စရာကောင်းပေမယ့်အန္တရာယ်မ‌ရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို ပြောပြပေးပါဦး…
တိရစ္ဆာန်တွေမှာ သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ဆောင်အထူးခြားဆုံး...
The picture on the left might confuse you, but the...
Celebrities Would Look Like If They Did One of the...
This dog’s head is casually floating down the street.
We Found9Answers to Questions That Have Been Nagging...
ခရီးသွားဧည့်သည်များ ဂရုပြုသင့်တဲ့ နိုင်ငံတကာမှ...